ऐश्वर्या र अभिषेकबीच खटपट, ऐश्वर्या र जया बेग्लाबेग्लै बस्न थाले ! - jagritikhabar.com
ऐश्वर्या र अभिषेकबीच खटपट, ऐश्वर्या र जया बेग्लाबेग्लै बस्न थाले !
बलिउडका चर्चित जोडी अभिषेक बच्चन र ऐश्वर्या रायको विवाहको १४ वर्ष पुगेको छ । तर यो अवधिमा उनीहरुको सम्वन्ध सुखद रहन सकेन । खासगरी ऐश्वर्या र अभिषेककी आमा जया बच्चनबीच बारम्बार उत्पन्न हुने किचलो भारतीय सञ्चारमाध्यममा छरपस्टै छन् । आमा र श्रीमतीबीचको वि’वादमा अभिषेक प्राय आमाकै पक्षमा हुन्छन् । यसले गर्दा पनि ऐश्वर्या आफ्नो पतिसँग खुशी छैनन् ।
एउटा फिल्मको स्क्रिनिङमा त अभिषेकले मिडियाकै अगाडि ऐश्वर्याको बे’इज्ज’त गरेका थिए । मिडियाले अभिषेक र ऐश्वर्याको एकसाथ फोटो खिच्न खोज्दा अभिषेक ‘उनको मात्रै खिच्नु’ भनेर सन्किदै हिँडेका थिए । सो घटनाबाट ऐश्वर्या निकै ल’ज्जित भइन् ।
यता सासु-बुहारीको सम्वन्ध बिग्रेको चाहिँ ऐश्वर्याको फिल्म ‘धुम टु’ को बेलादेखि नै हो । सो फिल्ममा अभिनेता ऋतिक रोशनसँग ऐश्वर्याको लि’पल’क सिन थियो । उक्त सिनलाई जयाले पचाउन सकिनन् र आ’पत्ति जनाइन् । बच्चन परिवारले सो दृष्य फिल्मबाट हटाउनसमेत निर्माण पक्षलाई द’वाव दिएको थियो । सोही फिल्ममा ऐश्वर्याले लगाएको छोटो लुगालाई लिएर पनि जयाले बखेडा गरेकी थिइन् ।
केही बर्ष अघि रिलिज भएको फिल्म ‘ए दिल है मुश्किल’ मा रणवीर कपुरसँग ऐश्वर्याले दिएको इन्टिमेट सिनलाई लिएर पनि बच्चन परिवार रुष्ट बनेको छ । स्वयम् अभिषेक बच्चनलाई पनि यो कुरा मन परेको थिएन । उक्त फिल्मको स्किनिङमा बच्चन परिवारका कोही पनि उपस्थित भएनन् । अभिषेकले आफ्नी पत्नीको फिल्मलाई एक पटक पनि प्रमोसन गरेनन् ।
पछिल्लो समय ऐश्वर्या र जया बेग्लाबेग्लै बस्न थालेको समाचार भारतीय मिडियाहरुमा आएको छ । तर, यसको पुष्टी भने हुन सकेको छैन ।
छोरी आराध्यालाई लिएर पनि ऐश्वर्या र अभिषेकबीच ख’टप’ट चलिरहेको बताइन्छ । समाचारअनुसार अभिषेक आफ्नी छोरीलाई बालकलाकारका रुपमा हिन्दी सिनेमामा इन्ट्री गराउन चाहन्छन्, तर ऐश्वर्या यसका लागि तयार छैनन् । -एजेन्सी